ဂိမ်း ကုမ္ပဏီ iDreamSky သည် Tencent နှင့်အခြား ကုမ္ပဏီ များမှ နောက်ထပ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များရရှိ ခဲ့သည် - Pandaily
ဂိမ်း ကုမ္ပဏီ iDreamSky သည် Tencent နှင့်အခြား ကုမ္ပဏီ များမှ နောက်ထပ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များရရှိ ခဲ့သည်
တနင်္ဂနွေ နေ့တွင် မိုဘိုင်း ဂိမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကုမ္ပဏီ iDreamSky သည်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း (HKEx) တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်၎င်း၏အဓိက ရှယ်ယာရှင် သုံး ဦး စလုံးသည် အစုရှယ်ယာ များပိုမို ဝယ်ယူ ခဲ့ကြသည်။
အထူးသဖြင့် Brilliant Seed, Tencent Mobile နှင့် Instant Flash တို့သည် ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ ၁၃. ၁၄ သန်း၊ ရှယ်ယာ ၁၃. ၁၄ သန်းနှင့် ရှယ်ယာ ၆. ၅၇ သန်း အသီးသီး အတွက် စာရင်းသွင်း ခဲ့သည်။ စာရင်း ပေးသွင်း ထားသည့် အစုရှယ်ယာ များသည် ကြေငြာ သည့် နေ့တွင် ကုမ္ပဏီ ၏လက်ရှိ ထုတ် ပေးသော ရှယ်ယာ အရင်းအနှီး ၏ ၂. ၅၀% ၊ ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ် ပေးသော ရှယ်ယာ အရင်းအနှီး ၏ ၂. ၄၄% နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ် ပေးသော ရှယ်ယာ အရင်းအနှီး ၏ ၂. ၃၁% ကို စာရင်း ပေးသွင်း ခြင်းဖြင့် တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် စာရင်း ပေးသွင်း ခြင်းမှ အသားတင် အမြတ် သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၉၅ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း) ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
အဆိုပါ iDreamSky နိုဝင်ဘာလ 26 ရက်နေ့တွင် (ကုန်သွယ် အချိန် ပြီးနောက်), ကုမ္ပဏီ တစ်ဦး နေရာချထား အေးဂျင့် ခန့် အပ် ရန် သဘောတူညီ ခဲ့, ကုမ္ပဏီ တစ်ဦး နေရာချထား အေးဂျင့် ခန့် အပ် ရန် သဘောတူညီ ခဲ့, နှင့် နေရာချထား အေးဂျင့် တစ်ဦး လျှင် ရှယ်ယာ နှုန်း ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ 5.92 ၏ စျေးနှုန်း အပေါ် 72,28 သန်း ရှယ်ယာ မှ အများဆုံး subscription များအတွက် နေရာချထား ပစ်မှတ် အနိုင် ရဖို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစား ခဲ့ ကြောင်း ကြေညာချက် ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နေရာချထား မှုမှ ခန့်မှန်းခြေ အသားတင် အမြတ် သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၄၂, ၇ ၀၄ သန်း ခန့်ရှိသည်။
ကြေငြာ ချက်အရ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ခန့်မှန်းခြေ အသားတင် အမြတ် ငွေ ကို၎င်း၏ အထွေထွေ လည်ပတ် ငွေ အရင်းအနှီး အတွက်အသုံးပြု ရန်၊ ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ထားသော ဂိမ်း များ ကိုတီထွင် ရန်၊ အုပ်စု၏ အော့ ဖ် လိုင်း စတိုးဆိုင် များနှင့်အခြား ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အနာဂတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ကိုတိုးချဲ့ ရန်ရည်ရွယ် ထားသည်။
မှတ်သား သင့် သည်မှာ စာရင်းသွင်း ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သော ကုမ္ပဏီ များအကြား Tencent Mobile သည် Tencent Holdings Limited ၏ အစုရှယ်ယာ လက်အောက်ခံ ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ Tencent သည် iDreamSky ၏အကြီး မား ဆုံး အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစုရှယ်ယာ ရှင် ဖြစ်ပြီး iDreamSky ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကို အမြဲတမ်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထောက်ခံ ခဲ့သည်။ IDreamSky သည် Tencent အား ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ထားသော ဂိမ်း များအတွက် သီးသန့် အေဂျင်စီ အခွင့်အရေး ကိုလည်း ပေးခဲ့သည်။ Tencent အမှုဆောင်အရာရှိ များစွာသည် iDreamSky ကမ္ဘာ ကိုပူးတွဲ တည်ဆောက်ရန် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း တွင်ပင် ပါဝင် ခဲ့ကြသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ရင်းမြစ်-ဂိမ်း မှတ်ပုံတင် နံပါတ် အတည်ပြု ချက်ကို မကြာမီ ပြန်လည်စတင် နိုင်ပြီး ဂိမ်း အတွက် လိုအပ် သည်ထုတ္ဴပန္ တဲ့
၂၀ ၂၀၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်တွင် iDreamSky က Tencent Holdings Limited ၏ဒုတိယ ဥက္က president ္ဌ နှင့် TiMi စတူဒီယို အုပ်စု ဥက္က president ္ဌ Yao Xiaoguang နှင့် Tencent Holdings Limited ၏ဒုတိယ ဥက္က president ္ဌ နှင့်fLightspeed & Quantum Studios Group ၏ဥက္က president ္ဌ Chen Yu တို့သည် ကုမ္ပဏီ၏ ရေရှည် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းရေးဆွဲ ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန် ကုမ္ပဏီ၏ မဟာဗျူဟာ ကော်မတီ တွင် အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ များနှင့် အဖွဲ့ဝင် များအဖြစ် အသီးသီး ခန့်အပ် ခဲ့သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင်IDreamSky သည် Tencent QQfamily IP လိုင်စင် ရရှိ သည်ဇူလိုင်လတွင် ပါတီ နှစ်ခု ပူးတွဲ တည်ထောင်ခဲ့သော ပထမဆုံး QQFamily အထင်ကရ စတိုးဆိုင် ကို Shenzhen ရှိ Happy Coast တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဤ တစ်ကြိမ် တွင် QQFamily အထင်ကရ စတိုး သည် ဒီဇိုင်နာ ကစားစရာ လုပ်ငန်းနှင့် ထပ်တူ ကျ သည်။ ၎င်းသည် iDreamSky သည် ဒီဇိုင်နာ ကစားစရာ လုပ်ငန်း သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဝင်ရောက် ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာလ တွင် iDreamSky သည် Tencent QQ စီးရီး ပုံရိပ်များကို အသုံးပြု၍ လိုင်စင် သဘောတူညီချက် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကြေငြာ ချက်အရ iDreamSky သည် ဒီဇိုင်း ကစားစရာ များ ကိုစီစဉ် ရန်၊ ထုတ်လုပ် ရန်နှင့် ရောင်းချ ရန်အတွက် QQ စီးရီး ပုံ များ ကိုအသုံးပြုရန် အခွင့်အာဏာ ရှိသည်။ အရောင်း လမ်းကြောင်း များသည် Tencent မှ အသိအမှတ်ပြု ထားသော အွန်လိုင်း နှင့် အော့ ဖ် လိုင်း လိုင်း များအားလုံး အကျုံး ၀ င်သည်။ Idreamsky ၏ ကိုယ်ပိုင် လိုင်း များ နှင့်တတိယ ပါတီ များနှင့် ပူးတွဲ ဖြန့်ဖြူးသော လိုင်း များအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။